Ahoana no ahazoan'ny RapLeaf angona? Ahoana no ampiasan'ny mpivarotra azy?
Wednesday, May 30, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
"Fantaro ny mpanjifanao" dia fiheverana efa voahaja efa ela mba hahombiazana eo amin'ny tontolon'ny varotra. Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia manangona adiresy mailaka, saingy tsy manana angona fanampiny izay afaka manampy anao hifandray tsara amin'ireo mpamandrika ireo. Rapleaf manampy anao hahafantatra bebe kokoa momba ny mpanjifanao. Manome tahirin-kevitra momba ny demografika sy fomba fiaina (taona, lahy sy vavy, ny fanambadiana, vola miditra, sns, tsindrio eto raha hijery azy rehetra) amin'ny adiresy mailaka mpanjifa amerikana.
Mendrika ny fandaniana sy ny fiezahana ve izany? Eny ny valiny fohy. Tao anatin'ny fanadihadiana tranga iray isan'andro, ny fizarazarana sy ny fanaingoana dia nahatonga ireto valiny manaraka ireto:
Fiakarana 30% amin'ny taha naoty misokatra na amin'ny tsindrio mampiasa andalana lohahevitra kendrena kendrena sy atiny.
Fisondrotana 14% amin'ny karama isaky ny mpampiasa vaovao mandritra ny 30 andro.
63% ny fihenan'ny vidiny isaky ny fiovam-po amin'ny vondrona fanaraha-maso.
Ny ampahatelon'ny fotoana hahatratra ny tombam-bidin'ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny fikendrena ny miralenta.
Tsotra ny fampiasana Rapleaf. Ampidiro ny lisitry ny mailaka ho rakitra na takelaka an-tsoratra, hahazoana taona, miralenta, toerana misy ny fanambadiana, fidiram-bola ao an-trano, asa, fanabeazana ary fampahalalana lalina hafa. Nilaza ny orinasa fa manana fampahalalana momba ny 70 isan-jaton'ny mailaka mavitrika rehetra any Etazonia. Izy ireo dia manome antoka ny tahan'ny lalao mihoatra ny 90% ary mivarotra antsasaky ny denaria isaky ny firaketana.
Ara-dalàna ve? Eny. Mpiara-miasa Rapleaf miaraka amina orinasam-baovao lehibe (sy kely) am-polony hanangona tahirin-kevitra sy hamatotra azy ireo amin'ny adiresy mailaka. izy ireo loharano azo avy amin'ny biraon'ny angon-drakitra ara-dalàna iza no manaraka ny fitsipiky ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa - loharano izay manome fampandrenesana sy safidy mety amin'ny mpanjifa amin'ny fizarana ny mombamomba azy. Jereo ny azy ireo FAQ ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Ny fahazoana mombamomba azy manokana amin'ny tontolon'ny tena izy dia ahafahan'ny mpivarotra manolotra izay tadiavin'ny mpanjifa, na mandefa mailaka misy dikany sy mifandraika fa tsy spam an-jambany. Ny fampahalalana toy izany koa dia manazava ny mombamomba ireo mpanjifany mahatoky indrindra, mamela azy ireo handamina tsara ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny marketing.
Tags: mividy angona mailakamailakaadiresy mailakaangona mailakafanatsarana ny mailakarapleaf